“Bini aadanimadiisu waa Eber waayo waa fulay Eey ah” – Mino Raiola oo aflagaadeeyay Pep Guardiola – Gool FM
“Bini aadanimadiisu waa Eber waayo waa fulay Eey ah” – Mino Raiola oo aflagaadeeyay Pep Guardiola
Liibaan Fantastic March 25, 2018
(Manchester) 25 Maarso 2018 Wakiilka reer talyaani ee Mino Raiola ayaa weerar ba’an ku qaaday tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola.
Mino Raiola ayaa ku tilmaamay Pep Guardiola mid aan shaqsiyad lahayn isla markaana bini aadanimadiisu ay tahay eber.
Wuxuu ku eedeeyay inuu yahay shaqsi fulay ah, isaga oo cadeeyay inuu aad u necebyahay tababaraha reer Spain isaga iyo waliba guulihiisa.
“Guardiola waa tababare cajiib ah, laakiin dhanka bini aadanimada waa mid eber ah waayo waa fulay Eey ah” ayuu yiri Mino Raiola.
“Haddii Manchester City ay ku guulaysato Champions League xiliciyaareed kaan wuxuu cadaynayaa inuu yahay tababare fiican, laakiin anigu ma jecli in taasi ay dhacdo”.
Dagaalka Raiola iyo Pep Guardiola ayaa ku qotoma markii tababaraha reer Spain uu kooxda Barcelona ka cayriyay Zlatan oo Raiola uu wakiil u yahay xiliciyaareedkii 2010-2011 markaas oo uu amaah ugu biiray Milan oo ugu danbayntii la wada wareegtay.
Raiola ayaana ka carooday in Zlatan uu ka maqnaado biladii Champions league markaas oo Barcelona ay 3-1 uga adkaatay Man United, wakiilka Ibrahimovic ayaana isku dayay habeen kaas inuu wacdaro ka raacsiiyo tababare Pep laakiin waxaa celiyay gudoomiyihii hore ee kooxda AC.Milan mr. Adriano Galliani.
“Final-kii Wembley ee 2011, dhankiisa ayaan u dhaqaaqay xili uu ku sii jeeday goobta abaal marinta laakiin Adriano Galliani ayaa i celiyay, nasiib ayuu lahaa Guardiola”.
WARKII UGU DAMBEEYAY: Pogba iyo Mourinho islama hadlaan!!!
MUUQAAL: Ozil oo tii dheereed ku dhigay Iniesta, kulankii dhawaa ee Germany vs Spain